१७ महिनामै फुट्यो विवेकशील साझा
२०७५ पौष २८ शनिबार ०६:५३:००
थापा समूहको आरोप-अपारदर्शी ढंगले पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भएपछि छुट्टियौँ
पार्टी प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य भन्छन्– वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जनताले दिएको मतमा धोका
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दाबी गर्दैै आएको विवेकशील साझा पार्टी स्थापनाको १७ महिनामै फुटेको छ । संयोजक रवीन्द्र मिश्रले मनोमानी ढंगले पार्टी चलाएको आरोप लगाउँदै अर्का संयोजक उज्ज्वल थापा १६ केन्द्रीय सदस्य लिएर बाहिरिएका हुन् ।
शुक्रबार थापा समूहका ४३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी ‘विवेकशील नेपाली दल’ दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तीनजना प्रदेश सांसदमध्ये रमेश पौडेल र विराजभक्त श्रेष्ठ थापा समूहमा छन् ।
सामाजिक अभियन्ता थापा नेतृत्वको विवेकशील पार्टी र पूर्वपत्रकार मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीबीच एकता भई ११ साउन ०७४ मा विवेकशील साझा पार्टी घोषणा भएको थियो । केही समययता थापाले पार्टी सञ्चालन गर्ने मिश्रको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । संयोजक थापाको अनुपस्थितिमा मिश्र समूहले मंगलबार पाँच केन्द्रीय सदस्य सिफारिस तथा १२ विभाग खारेज गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । गत मंगलबारको निर्णय अनुमोदन गर्न आगामी सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएकोमा त्यसअघि नै पार्टी विभाजित भएको छ ।
थापा समूहको आरोप– अपारदर्शी ढंगले पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भएपछि छुट्टियौँ
१७ महिनामा पार्टीमा वैकल्पिक राजनीतिक बुझाइ र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता रहेको प्रस्टै देखियो । मूल्य–मान्यतामा आधारित राजनीति र पार्टीमात्र नभएर परिपाटी विकास गर्ने अभियानमा यो यात्राले नतिजा दिन नसक्ने स्थिति आयो । अहिलेकै ढंगले अघि बढ्दा निर्णय–प्रक्रिया अपारदर्शी हुने, पार्टीमा सहभागितामूलक अभ्यास कमजोर हुने र सानो कोटरीले निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने भयो ।
विवेकशील साझाका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य भन्छन्–वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जनताले दिएको मतमा धोका भयो
उज्ज्वल थापाजीहरूले असन्तुष्टिहरू केन्द्रीय समितिमा राखेको भए हुन्थ्यो । तर, मिडियामा राख्दै हिँड्नुभयो । उहाँले पार्टी सञ्चालनका विषयमा राखेका मत आफैँले पनि पालना गर्न नसक्ने आदर्शवान थिए । उहाँले सुरुमा संयोजन समितिको बैठक बहिष्कार गर्नुभयो । आफूनिकट नेताको लहडमा लागेर पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुभयो भन्ने सुनेको छु । उज्ज्वलजीले पार्टी फुटाउनु दुर्भाग्य हो, गल्ती गर्नुभयो । वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जनताले दिएको मतमा धोका हो ।
मिश्र र थापा समूहमा बराबर केन्द्रीय सदस्य
विवेकशील साझाको विधानमा केन्द्रीय समिति ५१ सदस्यीय तोकिएको छ । तर, ३७ सदस्य मात्रै चयन भएकोमा केही समयअघि पाँचजनाले पार्टीमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए भने एक सदस्य बर्खास्त भएका थिए । गत मंगलबार थापा समूहको उपस्थितिविना पाँच सदस्य सिफारिस गरिए पनि औपचारिक अनुमोदन नभएकाले ३२ सदस्य मात्र थिए । पार्टी फुटेपछि मिश्र र थापा समूहमा बराबर सदस्य बाँडिएका छन् ।
एक्लाएक्लै उदय, एकतादेखि चुनावसम्म
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीति अस्थिर बन्यो । तोकिएको समयमा संविधान बनेन । जनतामा निराशा बढ्दै गयो । यही समयमा सामाजिक अभियन्तालगायत स्वतन्त्र युवाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भए । उज्ज्वल थापा, सन्तोष प्रधान, पुष्कर बम, गोविन्द बमलगायत सामाजिक सञ्जालबाटै जोडिएका थिए । उनीहरू दोस्रो संविधासभामा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगे । तर, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नभएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गरे ।
कुकुर चिह्न लिएर काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट गोविन्द नारायण, ४ बाट सन्तोष प्रधान, ५ बाट उज्ज्वल थापा र ८ बाट पुष्कर बमले उम्मेदवारी दिए । चुनाव चिह्नकै कारण पार्टीको चर्चा भयो । ‘चुनाव चिह्न के लिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल भयो,’ नेता रमेश पौडेल भन्छन्, ‘अन्तमा सांकेतिक रूपमा कुकुर चिह्न लिन सहमत भयौँ । चुनावमा सहभागिताले धेरैमाझ पार्टी चिनियो ।’ २९ जेठ ०७१ मा विवेकशील पार्टी दर्ता भयो ।
यता रवीन्द्र मिश्र पत्रकारिता छाडेर वैकल्पिक शक्ति स्थापनाका लागि भन्दै राजनीतिमा होमिए । १८ फागुन ०७३ मा साझा पार्टी घोषणा गरे । वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने दुवै पार्टीमा एकताको बहस चल्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन तालमेल गरेर लडे । नजिते पनि सकारात्मक चर्चामै रहे । ०७४ मा संघीय निर्वाचनअघि दुई पार्टी एक भए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सिट प्राप्त गर्न नसके पनि प्रदेश सभातर्फ समानुपातिकबाट तीन सांसद चुनिए ।
वैकल्पिक शक्तिको बहस सुरु गर्ने बाबुराम
नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बहस तत्कालीन एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेका थिए । ०७२ असोजमा पार्टी नै छाडेर वैकल्पिक शक्ति गठनको बहसमा लागे । ३० जेठ ०७३ मा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी घोषणा गरे । तर, गत निर्वाचनमा नयाँ शक्तिले पनि राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सकेन । त्यसयता नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाबीच एकता हुनुपर्ने आवाज दुवै पक्षका नेताहरूबाट उठ्दै आएका थिए ।
भएका दलले राम्रो काम नगर्दासम्म वैकल्पिक शक्ति जन्मिने सम्भावना : श्याम श्रेष्ठ
नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको खाँचो छैन भन्न मिल्दैन । अहिले भएका कुनै पनि पार्टी लोकप्रिय छैनन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ विचारसहितको वैकल्पिक पार्टीको खाँचो छ । तर, अन्य पार्टीको भन्दा फरक कार्यक्रम ल्यान नसक्नु नै कमजोरी भएको छ । यही कारण बाबुराम भट्टराईजीको पार्टी खुम्चियो ।
विवेकशील साझाको सन्दर्भमा केही फरक छ । पार्टी एकता हुँदा पर्याप्त छलफल–बहस भएनजस्तो लाग्छ । पार्टीलाई कसरी चलाउने, कुन पद्धतिमा चलाउने भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा नेताहरूबीच असमझदारी बढ्दै गएर पार्टी फुट्यो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनदेखि भित्रिएको विवाद फुटसम्म
गत वर्ष माघमा भएको राष्ट्रिय सभा चुनावका क्रममा विवेकशील साझा पार्टीमा विवादको बिउ रोपिएको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका कांग्रेससमर्थित राधेश्याम अधिकारीलाई पार्टीले भोट दिने निर्णय गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । संयोजक मिश्रपक्षले अधिकारीको समर्थन गर्दा थापा पक्षले आपत्ति जनायो । थापापक्षले आफ्नै उम्मेदवार उठाउनुपर्ने आवाज उठायो । अन्ततः विवेकशील साझाको मत पाएर अधिकारी विजयी भए । त्यही निहुँबाट सुरु भएको विवाद विवेकशीलभित्र भुसको आगोझैँ सल्कियो ।
१९ साउनमा प्रदेश ३ का संयोजक र प्रदेशका पाँच जिल्ला संयोजकको नियुक्तिले विवाद झन् बढायो । असन्तुष्ट भएर चार केन्द्रीय सदस्यले पार्टी नै परित्याग गरे । पछिल्ला केही समययता थापा देश दौडाहामा निस्किए । कार्यकर्ताको सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार गरे । मिश्रपक्षलाई चित्त बुझेन । लगत्तै गत मंगलबार थापाको अनुपस्थितिमा मिश्रपक्षले पार्टीका १२ विभाग खारेज गरिदियो । पाँच नयाँ केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको सिफारिस ग-यो । प्रदेश संयोजक पनि थपे । सो निर्णय अनुमोदन गर्न आगामी सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान भएको थियो । मिश्रपक्षको निर्णयबाट असन्तुष्ट थापापक्षले भने बैठक बहिष्कार गर्ने बताएको थियो । तर, बैठक नआउँदै थापा पक्षले पार्टी फुटायो ।